Taageereyaasha Ururka Rays oo banaan-baxyo ka dhigay Hargeysa | Somaliland.Org
Taageereyaasha Ururka Rays oo banaan-baxyo ka dhigay Hargeysa
November 9, 2012	Hargaysa (Somaliland.Org) Ololaha Doorashada golayaaha deegaanka wajigiisa labaad oo galay maalintii shanaad ayaa waxaa maanta dalka guud ahaan ololaha u lahaa isla markaana ay ahayd kaltankoodii labaad urursiyaasadeedka Rays.
Gudoomiye kuxigeenka koobaad ee urursiyaasadeedka RAYS ahna muharax u taagan xildhibaanada golaha deegaanka ee Caasimadda Hargaysa ayaa shalay kala qayb galay Taageereyaasha Ururkiisa ee caasimada Hargaysa isu soo baxa ololaha doorashadda.
Aadan Axmed Cilmi(dhoolayare ) ayaa muujiyay cududa taageero ee uu ka haysto dadwaynaha caasimada Hargaysa, waxaanu soo bandhigay taageerayaal tiro badan oo buux dhaafiyay garoomadda xaafadaha Maxamed Mooge iyo Guryosamo.
Gudoomiye ku xigeenka urur-siyaasadeedka RAYS ahna musharax u taagan golaha deegaanka Hargasya Aadan Axmed Cilmi (Dhoolayare), ayaa u mahad celiyay taageereyaashii u soo ban-baxay ururka RAYS, waxaanu yidhi “Walaallayaal waad ku mahadsan tihiin sidaad cududiina u muujiseen ee aad isugu soo baxdeen. waxa uu ururka dhalinyarada iyo shaqaalaha ee Rays u taagan yahay inuu ummadiisa waxu qabto.”
Aadan Dhoolayare oo hadalkiisa sii watay wuxuu yidhi “Waxaanu idiin balan qaadaynaa markaad codkiina na siisaan inaanu noqono kuwo idiin adeega oo caasimad ka dhiga mid caasimad u qalanta oo leh adeegyadii aasaasiga ahaa oo dhan. Suurto gal ma aha in habeen walba biyo la’aan darteed caagado lala meeraysto.”
“Xukuumadda waxaan u soo jeedinayaa inay dhammaan muraaqibiinta ururadda iyo xisbiyada kharashkooda wada bixiso, si aynu u helo doorasho xor iyo xalaal ah oo aanay ka bixin oo kaliya xisbiga KULMIYE. Haddii ay taasi dhacdana waxay dhaawacaysaa hanaanka doorasho ee aynu u socono,”ayuu yidhi Guddoomiye Ku xigeenka RAYS.
Musharax Aadan Axmed Cilmi (Dhoolayare) oo la hadlayay taageerayaasha isugu yimi garoonka kubada cagta ee xaafada Maxamed Mooge oo ka kala socday dhammaan degmooyinka Hargaya isla markaana ay kala qayb galayeen musharax Mustafe Macalin Caydiid. Iyo xubno ka mida madaxda urur-siyaasadeedka RAYS.
Waxa halkaa ka hadashay gudoomiyaha garabka haweenka ee urursiyaasadeedka RAYS. Raxma Maydal waxaanay tidhi “Walaalayaal ururka RAYS wuxuu gacan siinayaa oo uu xuquuqdooda siinayaa haweenka iyo dhalinyarada. markaa inagana waxaa inagu waajib ah inaynu hadaynu dumarka nahay aynu codkeena siino Muharixiinta ururka Rays oo balan qaaday inay xuquuqda haweenka u ogal yihiin.”
waxaa kale oo halkaa ka hadlay muharax Mustafe Macalin Caydiid oo ka mida musharixiinta Hargaysa uga sharaxan urur-siyaasadeedka RAYS. Waxaanu yidhi “Walaalayaal waan idiinka mahadanaqayaa sidaad cududiina u muujiseen ee aad isugu sigu soo baxdeen. waxaana inoo balan ah inaynu maalinta codbixintana sidaa isugu oo baxno oo aad codkiina na siisaan.”
Previous PostWasiirka Madaxtooyadda oo dalka ku soo laabtay, kana war-bixiyay socdaalkiisii IngiriiskaNext PostWasiirka Madaxtooyadda oo Ingiriiska Dhaqaale u soo hooyay KULMIYE	Blog